Sekoly Iray Ao Etazonia Mampianatra Ireo Raim-pianakaviana Koreana ‘Ny Fomba Famihina’ · Global Voices teny Malagasy
Sekoly Iray Ao Etazonia Mampianatra Ireo Raim-pianakaviana Koreana ‘Ny Fomba Famihina’
Voadika ny 10 Novambra 2015 3:22 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, عربي, Aymara, English
Ny Sekolin'ny Raim-pianakaviana Duranno, mampianatra ireo raim-pianakaviana Koreana ahoana no fomba atao mba hifandray akaiky kokoa sy mba ho ray amandreny maneho fitiavana. Ahitana lesona ara-bakiteny ny fomba famihina ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Sary: Natolotr'i Duranno, Sekolin'ny Raim-pianakaviana.
Ity lahatsoratra sy tatitra anaty onjam-peo nataon'i Heidi Shin ho an'ny The World ity dia niseho tao amin'ny PRI.org ny 28 Oktobra 2015, ary naverina navoaka indray teto ho ampahany amin'ny fifanekena mifampizara votoaty.
“Tsy manam-pahazarana mifamihina aho”, hoy Jason Chang, 47 taona. “Amin'ny maha-lehilahy Koreana, rehefa nitombo aho, ny raiko sy reniko, tsy tena nifamihina izany mihintsy izahay.”
Mpianatra ao amin'ny Sekolin'ny Raim-pianakaviana Duranno ao Centreville, Virginia i Chang – toeram-ponenan'ny vondrom-piarahamonina Koreana tsy mitsaha-mitombo. Ilay Sekolin'ny Raim-pianakaviana dia efatr'andro natao hisintahana amin'ny endriny rehetra, novolavolaina ho fanovàna ireo raim-pianakaviana Koreana mafy lamosina mba ho ray amandreny maneho fitiavana sy mandray andraikitra kokoa. 70 taona ny mpianatra antitra indrindra, vao 27 taona kosa ny tanora indrindra, ary ireo rehetra ireo dia manana zavatra iraisana – ny vadin'izy ireo no nahatonga azy ireo hankao.
“Amin'ny ankapobeny dia ikàla no nanaiky sady niteny fa, ity no fotoana fanombohana. Mirosoa ka mandehana” hoy i Chang mibaboka. “Fa faly aho nanao azy io. Nanana asa entimody ry zareo, fantatrao, fa raha amin'izao fotsiny tsy hanao aho. Nanome ahy fomba fijery vitsivitsy io.”
Nasaina nieritreritra izay niainany niaraka tamin'ireo rainy avy ireo mpianatra – ary izay maha izy azy ireo amin'ny maha-ray azy. Sary: Heidi Shin. Nampiasaina niaraka tamin'ny fanomezandàlan'i PRI
Ato anaty trano fihaonan'ny fiangonana izahay, izay misy tarika iray miventy mivantana ireo hira kristianina, sady miara-mihira avokoa ireo lehilahy, arahan'ireo vakiteny sy asa, ao anatin'izany ny lesona ara-bakiteny mikasika ny fomba famihina. Ny tànana iray eto, misintona olona hanatona, ary tsy mandondona lamosina. Avy eo misy ireo vondrona madinika fifanakalozan-kevitra izay sady mitovy amin'ny ekipa misahana ny fitsaboana no toy toerana fisoloana akanjo.
Miresaka aminà lehilhahy iray tanora kokoa 20 taona ny mpilatsaka an-tsitrapo iray 40 taona. “Eritreretinao ve fa tia anao ny rainao?” hoy izy manontany. Miato kely ilay tovolahy, ary mamaly azy ilay iray zokinjokiny. “Eny izany tokoa. Tsy hainy fotsiny ny mamboraka azy”
Nanomboka tao amin'ny fiangonana iray tao Seoul ny taona 1990 ny Duranno Sekolin'ny Raim-pianakaviana, ho setrin'ny areti-mifindran'ny tsy fahabangàn'ireo ray tao Korea Atsimo. Ireo raim-pianakaviana Koreana no miasa mandritra ny ora lavabe indrindra any anatin'ny tontolon'ny tany mandroso , derain'ny soatoavina Confucian ry zareo noho ny tsy fanehoan'izy ireo fihetseham-po, ary ho an'ny sasany, io no fenitra mba hampanarahan-dalàna ara-batana ireo zanany.
Ny andro faha-telo, mpianatra vitsivitsy sahady no nitsoaka andaharana. Saingy ireo izay nijanona kosa nahagaga fa nahatoky tsara tamin'ny fizaràny. Ny ankamaroany dia milaza ho diso fanantenana tamin'ireo ray niteraka azy, ny sasany sorena noho ny ataon'ny zanany lahy efa lehibe, ary ny sasany manaiky fa tsy dia nahita firy ny fitomboan'ireo zanany. Ny sasany manaiky amin'alahelo fa nanjary nitovitovy tamin'ireo rainy izy ireo.
Mandritra ny fanomezana maripankasitrahana ao amin'ny Sekolin'ny Raim-pianakaviana, manasa ny tongotry ny vadiny ireo lehilahy, tahaka ny nanasàn'i Jesosy ny tongotry ny mpianany ao anaty Baiboly. Sary: Heidi Shin. Nampiasaina nahazoana alalàna tamin'ny PRI
Ary tsy fanomanana ray mendrika kokoa fotsiny ny sekoly. Nomena asa entimody ireo lehilahy, toy ny fanoratana taratasy ho an'ny vadiny, ary ny fizaràna ny lisitr'ireo antony 20 itiavanao azy. Manome azy karazana fijerena manokana toy ny fanaonao fony ianareo nampiaraka, hoy ny mpampianatra mamporisika.
Mizara ny taratasim-pitiavana manohina fo nataony ho an'ny vadiny ny iray amin'ireo raim-pianakaviana. Hatramin'ny nisian'ny sekoly tao Etazonia, efatra taona lasa izay, ekeny fa mafy kokoa noho izy nandrasany ny fiainana. “Miaina anaty trano kely miaraka amin'ireo ankizy, tsy afaka miteny ny teny na mahita asa”, hoy izy, “mitombo anaty havizanana izahay, ary niteny mahery mihoatra noho izay noeritreretinay.”
Araka ny fandehany, henjana ny mitaiza, ary ny rarintsaina noho ny maha-mpifindra monina koa vao mainka manasarotra azy. Noho izany, natomboka tany am-piandohan'ny taona 2000 tao Etazonia ny dika ho an'ny Sekolin'ny Raim-pianakaviana Duranno. Mamaly ny filàn'ireo mpifindra monina vao haingana ny sekoly amin'ny endriny Koreana, raha toa ka manampy ny andian-taranaka manaraka ny sekoly miteny Anglisy. Nandritra ny taona maro, nihanaka manerana ny firenena maherin'ny 40 eran'izao tontolo izao ilay sekoly, ahitana olona maherin'ny 300.000 nahazo maripahaizana.
Raha ny marina, ireo notolorana maripahaizana no mitantana manontolo ny sekoly. Lazain'ireo lehilahy zokinjokiny iray fa tsy tian'izy ireo ny mahita ireo raim-pianakaviana tanora mamerina ny hadisoana nataon'izy ireo. Apetak'izy ireo ny aron'akanjony ary arosony ny kafe, zarain'izy ireo miaraka amin'izany koa ny tantarany mandritra ny ora fiatoana. Marina mihintsy, resaka volana vitsy monja dia mora hoy izy ireo ny miverina amin'ny fanao taloha, saingy raha miverina ho lasa mpanao an-tsitrapo, misy vondrom-piarahamonina iray mitaiza azy ireo ho tompon'andraikitra, hoy Dave Lee – miloko alimo.
“Na dia tafalatsaka matetika amin'io aza aho,” hoy izy, “amin'ny alalan'io sekoly io, no mampifanantona ahy bebe kokoa amin'ny fianakaviako – ny vadiko sy ireo zanako. Afaka mandinika ireo ratsy izay nataoko aho, na afaka nanome tamin'ny fomba hafa.”
Mpivady maka sary noho ny fahazoany maripahaizana tao amin'ny Sekolin'ny Raim-pianakaviana Duranno. Sary: Heidi Shin. Nampiasaina nahazoana alalàna tamin'ny PRI.
Omena fanasàna hanatrika ny fanomezana maripahaizana ireo raim-pianakaviana ireo ny fianakaviany. Manova ny akanjo amboniny ho ny ilay mitsipitsipika toy ny an'ny mpitsara lalao ahafantarana ny sekoly ireo lehilahy, sahala amin'ny marika iray milaza ny fiovan'izy ireo. Ny alina famaranana, mitokana miaraka amin'ireo lamba famaohana eo an-tsorony ireo lehilahy. Mandohalika eo anatrehan'ireo vadiny ry zareo sady manasa am-pitiavana ny tongotr'izy ireo, tahaka ny nanasàn'i Jesosy ny tongotry ny mpianany ao anaty Baiboly. Miankina eo amin'ny sezany ireo vehivavy, mamafa ny masony amin'ny lamba kely.
Mahita ramatoa 50 taona aho, mifampitantana amin'ny vadiny sady miandry ny laharany haka sary fahatsiarovana ny fizarana diplaoma. Mitazona voninkazo izy ary maniry fatratra ny hanambara ireo fiovàna hitany amin'ny vadiny. “Hainao ihany, ireo lehilahy Koreana, tia misotro.” Nanaiky ny tsy hisotro betsaka intsony ny vadiny, hoy izy, ka sambatra izy. “Tena faly aho mandre izany. Eny faly, tena faly”.
Apetrak'ireo raim-pianakaviana eo an-tsorky ny zanany ny sandriny, ary mitsiky izy mba ho alaina sary – toy ny maivamaivana sady feno fanantenana ny vadin'izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, efa mivezivezy sahady ny mpiasa, mampiditra ireo vao nahazo maripahaizana mba hanatevina ny laharan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny Sekolin'ny Raim-pianakaviana.
RAKOTOMANANA Njatonirina Tafitasoa
mba mangataka toro-hevitra momba ” mise en oeuvre” amn’ny sekolin’ny ray aman-dreny
04 Avrily 2017, 10:17
Ny fametrahana azy ve no tianao anontaniana?
04 Avrily 2017, 14:38
Mila manao fikarohana kely angamba raha tsy voasoratra ao amin’ny lahatsoratra ilay izy. Efa karazana fijoroana vavolombelona ity hitantsika etoana ity ka efa karazana savaranonando ihany izany hahitana ny lala-kombana.
Azo atao ihany koa ny manoratra any amin’i Heidi Shin namoaka azy voalohany, saingy amin’ny teny anglisy no tsara iresahana aminy. Ny anay manko efa fandikana ho amin’ny teny malagasy ny lahatsoratra no sahaninay.
04 Avrily 2017, 14:47
Misaotra betsaka ny mpanoratra sy ny mpandika.
Propagandy sa fiatsarambelatsihy sa eso no hilazana izao.
Ianao firenena nahavita nanasaraka firenena 1 ho lasa 2 indray ve.
Ianao firenena nitarika ady betsaka indrindra sy nandatsaka ain’olona betsaka indrindra teto an-tany ve no hidoka tena fa ao aminao koa misy sekoly hampianatra ny sasany hifamihina.
Izay ny ve tsy opa.
Tokony mba mahalala menatra ihany i Etazonia indraindray fa tsy de mipetsopetsona sy kevoka loatra toa io.
10 Septambra 2017, 18:41
Ny Shinoa sy ny Japoney ary ny Koreana tsy mifampikasoka izany rehefa mifampiarahaba… dia izay no mety ho anton’ny tantara sy ny fandravana ilay fahazarana tsy mifamihina… na mifandray tanana akory aza, saingy noho ny ‘ifanarahana’ manerana izao tontolo izao dia voatery mandray tanana olon-tsy fantatra ry zareo… indrindra fa ny diplaomaty sy ny mpanao politika hafa.
10 Septambra 2017, 23:41